तपाइँको रचनात्मकतालाई पखेटा दिन उत्तम ग्राफिक्स ट्याब्लेटहरू क्रिएटिव अनलाइन
एक समयमा जब आईप्याडको साथ हामीसँग एडोब फोटोशप सीसी हुन सक्छ, हामीसँग हाम्रो हातको साथ वा एक स्टाइलसको साथ चित्रण गर्न धेरै र अधिक उपकरणहरू छन्। यी उपकरणहरू समावेश गर्दछ सर्वश्रेष्ठ ग्राफिक्स ट्याब्लेटहरू हाल उपलब्ध छन् र तपाइँ धेरैलाई पक्कै पनि तिनीहरूलाई थाहा छ।
सबै भन्दा पहिले हामीसँग Wacom को ती छन्, यद्यपि त्यहाँ अरुहरु छन् XP-Pen वा Huion जस्ता बाहिर उभिरहेका ब्रांडहरू, केही अज्ञात जो पूर्ण रूपमा पहिलो ब्राण्डले ओगटेको सूचिमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्छन्। आउनुहोस्, त्यो उत्कृष्ट ग्राफिक्स ट्याब्लेटको श्रृंखलामा एक नजर राख्दछौं र ब्ल्याक फ्राइडेका लागि तयारी गरौं।
1 Wacom Cintiq २२HD
3 XP- पेन कलाकार १.15,6..XNUMX कलम प्रदर्शन
4 Wacom Intuos Pro (ठूलो)
5 Wacom Intuos Pro (मध्यम)
8 Wacom MobileStudio प्रो १
9 Wacom Intuos कला
10 XP- पेन स्टार 03
12 Wacom बांस CTL471
13 Huion 1060 प्लस
Wacom Cintiq २२HD
यस सूचीमा हामी उत्कृष्ट ग्राफिक्स ट्याब्लेट राख्नेछौं र हामी लागत बिर्सनेछौं। हामी केवल एक उच्च मूल्य को सामना गर्दै छौं, तर अविश्वसनीय गुणवत्ताको हाम्रो सर्जनशीलता वा अर्को लोगोको डिजाइन मुक्त गर्न हामी काम गरिरहेका कम्पनीको लागि।
Wacom Cintiq 22HD टच पेन डिस्प्ले एक को लागि बाहिर खडा २.25,6..15,7 x १.XNUMX..XNUMX इन्च रेखाचित्र क्षेत्र। रिजोल्युसन १ 1920 ०० x १०० हो र यसको २,०1080। स्तरहरूको कलममा दबाब छ। हामीसँग DVI र USB २.० जडान हुनेछ र यो दुबै विन्डोज र म्याकोसका लागि उपयुक्त छ।
यसको एक विकृति हो कम स्क्रीन रिजोलुसन ग्राफिक्स ट्याब्लेट को आकार को लागी; एक भन्दा बढि सेट गर्न सक्ने पोइन्ट।
एउटा सबैभन्दा मनपर्ने ग्राफिक्स ट्याब्लेट जुन तपाइँलाई यसको टच स्क्रिनको साथ चित्रित गर्न अनुमति दिन्छ र हामी यसको Cintiq २२HD लाई सामान्य मोनिटरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। यसको मूल्य १ 1609,99०। .XNUMXeयूरोबाट सुरू हुन्छ.
ध्यान दिनुहोस् नयाँ Cintiq 24 Pro 24 र Wacom बाट अरु।
La Ugee M708 एक ग्राफिक्स ट्याबलेट हो त्यो यसको keys कुञ्जी र एक दबाव सम्वेदनशीलता मा बाहिर खडा छ २,०2.048। लेबल कलम। एक १० x inch इन्च ट्याब्लेट जुन inch,० lines० रेखा प्रति चित्र ईन्च ड्राइंग रिजोलुसनको द्वारा पनि चित्रण गरिएको छ।
यस ग्राफिक ट्याब्लेटको आकारलाई ध्यानमा राख्न यसको पक्ष र विपक्षको साथ आउँछ। यदि हामीलाई यसको कन्सेन्सको आवश्यक छैन वा ट्याब्लेटसँग कन्फिगर गर्न आवश्यक धैर्यता छ वा केही अनुप्रयोगहरू काम गर्नुपर्दैन जसरी उनीहरूले गर्नुपर्दछ।
तपाईंको शक्ति सतह हो, प्रतिक्रिया समय र यसको 8 कुञ्जीहरू द्रुत पहुँच। यसको मूल्य १२127 यूरो हो, त्यसैले हामीले यस ट्याब्लेटको बारेमा हामीलाई के रूचि राख्ने छ त्यसको मूल्या to्कन गर्नुपर्नेछ, किनकि कार्य क्षेत्र पर्याप्त विचारशील छ।
XP- पेन कलाकार १.15,6..XNUMX कलम प्रदर्शन
यस ट्याब्लेटको लागि पैसाको मूल्यको हिसाबले यो एक उत्कृष्ट ग्राफिक्स ट्याब्लेटहरू मध्ये एक हो। यसको सक्रिय ड्राइंग क्षेत्र .34,3 19,3..1920 x १ .1080 ..XNUMX सेमी १ XNUMX ०० x १०० र स्क्रिन रिजोलुसनको साथ छ १.15,6..XNUMX इन्च आयाम। कलमको प्रेसर,, १ 8.192 levels स्तर हो र नयाँ युएसबी टाइप-सी पोर्टको लागि बाहिर खडा छ। दुबै विन्डोज र म्याकोसका लागि उपयुक्त।
हामी जोड दिन्छौं कि हामी ग्राफिक्स ट्याब्लेटको सामना गर्दैछौं जुन यसको प्रस्तावको लागि सबैमा उत्कृष्ट मूल्य हुन्छ। मेरो मतलब, 344,99 XNUMX। यूरो को लागी हामीसंग एक राम्रो कलम र ठूलो सतह हुनेछ रेखाचित्र को। यसले मल्टिमेडिया अनुभवको लागि ध्वनि समावेश गर्दछ। त्यो हो, हामी त्यो ट्याब्लेटको सामना गर्दैछौं जुन एउटा ग्राफिक ट्याब्लेटको आवश्यकता भएको डिजाइनर वा रचनात्मक सबै आवश्यकताहरू समेट्छ।
Wacom Intuos Pro (ठूलो)
Wacom Intuos प्रो एक ग्राफिक्स ट्याबलेट हो यो निश्चित रूपमा यसको क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो हो। रचनात्मक र सबै प्रकारका कलाकारहरूको लागि उत्तम जो कलममा ठूलो संवेदनशीलता पाउन चाहन्छ, एक फ्लोड ड्रइ। र जसले एक उत्कृष्ट उपयोगकर्ता अनुभवको लागि वायरलेस जडान प्रयोग गर्दछ।
यसको विशिष्टता को सम्बन्ध मा। Wacom Intuos प्रो यसको x 43 x २.28,7..XNUMX सेमी र एक संवेदनशीलता द्वारा विशेषता हो 8.194 स्तर कलम दबाव। यससँग आधारभूत जडानहरू जस्तै USB वा ब्लुटुथ छन्।
यो ग्राफिक ट्याबलेटले कलाकारलाई दिन्छ भन्ने तथ्यले विशेषता दिन्छ ठूलो ठाउँ व्यापक रूपमा चित्रित गर्न र कुनै अवरोध बिना। यसैले हामी सबै स्तरमा एक उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव प्रस्ताव गरेर हामी यसको क्षेत्रको सबै भन्दा राम्रो मध्ये एकको सामना गरिरहेका छौं। कि ड्राइंग क्षेत्र ठूलो हुन सक्छ, हो, तर यो पहिले नै मूल्य मा यसको 479 XNUMXeयूरो को सट्टामा धेरै प्रदान गर्दछ।
Wacom Intuos Pro (मध्यम)
हामी चित्रको क्षेत्रको साथ प्रो भन्दा कान्छो भाइको सामना गरिरहेका छौं त्यो .33,8 21,9.। x २१..XNUMX सेन्टीमिटर हुन्छ र,, १ 8.192 levels स्तरहरूको पेन प्रेशर संवेदनशीलता। यसले यूएसबी र ब्लुटुथ जडान पनि प्रयोग गर्दछ, र ठूलो जस्तै यो ठूलो ड्राइंग अनुभव प्रदान गर्दछ, यद्यपि ती अतिरिक्त सेन्टिमिटरहरूद्वारा आकारमा अधिक सीमित।
यसले बहु-टच समर्थन प्रदान गर्दछ र हामी यसको कार्यक्षेत्र कुञ्जीलाई विभिन्न प्रकारकाका लागि हाइलाइट गर्न सक्छौं। कुलमा आठ सर्टकट कुञ्जीहरू छन्, टच प्याड र चित्रिक क्षेत्र ग्राफिक ट्याब्लेटका लागि सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्तम। तिमी सक्छौ बहु-स्पर्श इशाराहरू प्रयोग गर्नुहोस्त्यसोभए यो ग्राफिक्स ट्याब्लेट हो जुन यसको क्रेडिटमा केहि सुविधाहरू छन्।
यसको मूल्य वरपर छ 349 XNUMXeयूरो ट्याब्लेटलाई विचार गर्नका लागि यदि एक एक डिजाइनर हो र ठूलो आकारको ठूलो स्थान आवश्यक पर्दैन। यस ग्राफिक्स ट्याब्लेट बजारमा Wacom राजा रहन्छ र यसको अधिकांशले यस कम्पनीले सिर्जना गरेको हो।
हामी ग्राफिक ट्याब्लेटको सामना गरिरहेका छौं सानो आयाम र «कम लागत of को, वा कम लागत। यसको मतलब यो होइन कि यसले हामीलाई सबै प्रयोगहरू दिदैन जुन हामीलाई केहि खास उद्देश्यहरूको लागि आवश्यक पर्दछ। यसको रेखाचित्र क्षेत्र १२.१ x .12,1..7,6 सेन्टीमिटर छ र यसको कलमले ,,० 4.096 levels स्तरहरूको एक दबाव सम्वेदनशीलता प्रदान गर्दछ; जुन कम लागतको ट्याब्लेटको लागि खराब छैन।
एक Huion H430P ग्राफिक्स ट्याब्लेट उच्च मान के यसले हामीलाई सबै आधारभूत कुराहरू दिन्छ जुन तपाई ट्याब्लेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्दैन। अर्को शब्दहरुमा, हामी ग्राफिक ट्याब्लेटको यस संसारमा शुरू गर्न सिद्ध छौं र यदि यसले हामीलाई विकसित गरेको छ वा हामीले सधै प्रयोग गरेको उपकरणहरूसँग जारी राख्नको लागि उपयुक्त छ भने; सबैलाई ग्राफिक्स ट्याब्लेटको आवश्यक पर्दैन, तर कम्प्युटर र माउसको साथ, र पर्याप्त सीपको साथ, तपाईं केहि राम्रा आँखा पार्ने डिजाईनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।
यो स्पष्ट छ कि यसको रेखाचित्र क्षेत्र एकदम सानो छ, तर कलम पर्याप्त संवेदनशील छ यस ग्राफिक्स ट्याब्लेटको पूर्ण क्षमता प्राप्त गर्न। अवश्य पनि, त्यस क्षण तपाईं Huion H430P को मालिक बन्नुहुन्छ, तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंलाई केहि थप चाहिन्छ। तपाईंसँग बिभिन्न अनलाईन स्टोरहरूमा 30० भन्दा बढी युरोको लागि यो छ।
यदि हामीलाई सुरुमा थाहा छ कि हामीलाई H430P भन्दा ठूलो रेखाचित्र क्षेत्र चाहिन्छ किनभने हामी यसको साथ डिजिटल चित्रण गर्न चाहन्छौं, Huion H640P सुरू गर्नका लागि उत्तम छ, तर कम लागतलाई बेवास्ता नगरी।
ग्राफिक्स ट्याब्लेट को ड्राइंग क्षेत्र Huion H640P १ x x 16. .9,9 सेमी छ र कलम को एक दबाव संवेदनशीलता 8.192 स्तरहरु छ; यो पनि यो अन्तिम बिन्दुमा सुधार गर्दछ H430P। कुन धेरैले यस ट्याब्लेटलाई प्राथमिकता दिन सक्दछन् यदि उनीहरूको खल्तीमा थोरै पैसा छ र यससँग डिजाईन गर्दा अन्य आयामहरू खोज्नुहोस्।
यसका सद्गुणहरू मध्ये हामी सानो भएकोमा भर पर्दछौं, त्यो रेखाचित्र क्षेत्र र प्रकाशको साथ पनि, यसलाई सराहना गरियो। यसले उत्कृष्ट रेखाचित्र अनुभव प्रदान गर्दछ र कलमलाई यसको सञ्चालनको लागि ब्याट्री चाहिदैन। यसैले हामी Wacom को लागी एक उत्तम विकल्पको सामना गरिरहेका छौं। विशेष गरी यदि हामीलाई थाहा छ कि यो लगभग e० युरो हो।
Wacom MobileStudio प्रो १
र यदि हामीसंग बजेट छ भने, Wacom MobileStudio Pro 13 गुणहरु को एक प्रशस्तता छ। हामी २ .29,4 ..16,51 x १.8.192..3१ सेमि रेखाचित्र क्षेत्र र pen, XNUMX १ levels २ को दबावको संवेदनशीलताको साथ कलमको बारेमा कुरा गर्दैछौं। एक साँचो ग्राफिक ट्याब्लेट जसमा USB USB टाइप-सी पोर्टहरू, ब्लुटुथ र वाइफाइ छन्।
La स्क्रीनसँग २,2.560० x १,1.440० रिजोलुसन छ र यसैले यो एक शानदार दृश्य अनुभव प्रदान गर्दछ। रेखाचित्र अनुभव को साथ यो प्रदान गर्दछ। उहाँ यसमा मात्र हुनुहुन्न, तर हिम्मतमा ऊसँग विन्डोज १० को साथ पूर्ण कम्प्युटर छ। हामीलाई बुझ्ने हो भने यो ग्राफिक ट्याब्लेटको अर्को चरण हो र बरु पेशेवर दुनियाँमा समर्पित हुन्छ। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि कोही पनि पाउँदछ।
इंटेल कोर प्रोसेसरहरू, एसएसडी हार्ड ड्राइभ, विन्डोज १०, एक उच्च गुणवत्ता स्क्रीन र एक सरल उदात्त रेखाचित्र अनुभव। हामीसँग १ larger इन्चको विकल्प पनि छ अझ ठूलो ड्राइंग क्षेत्र लिन। यसको मूल्य १२16 युरो जति छ।
Wacom Intuos कला
Wacom बाट अर्को जुन कलम समावेश गर्दछ र विशेषता छ १,०२1.024 को एक दबावको संवेदनशीलता को स्तर द्वारा। यसको रेखाचित्र क्षेत्र सानो मोडेलमा १ 15,2.२ x .9,5 ..21,6 सेमी देखि मध्यम मोडेलमा २१..13,5 x १.XNUMX.। सेन्टीमिटरसम्म छ।
साथै express एक्सप्रेस कुञ्जीहरू छन् जोसँग छिटो कार्यहरू गर्ने जबकि कलम हाम्रो हातमा राम्रोसँग समात्दै छ र एक ग्राफिक ट्याब्लेट मार्फत उत्पादकत्व बढाउने। यसमा कोरेल पेन्टर एसेन्शिअल पेन्टि software सफ्टवेयर समावेश छ, जसको साथ तपाईं प्रसिद्ध र प्रतिष्ठित वाकम ब्रान्डबाट यस ग्राफिक ट्याब्लेटको साथ आफ्नो रचनात्मकता मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यसको मूल्य सानो मोडेलको लागि। 99,90 ० युरो हो, जब मध्यम आकार २०eयूरो पुग्छ। एकले तपाईको आकार कोर्नु पर्ने छ जब तपाईले डिजिटल अंक गर्नु पर्छ यस शैली को काम गर्न को लागी प्राप्त गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि यो Wacom CTL-471 को नयाँ संस्करण हो, त्यसैले हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं यसमा एक नजर राख्नुहोस् यदि तपाईं केही यूरोहरू बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने।
यो अहिले हो जब Wacom केहि हप्ता को लागी केहि संग छ तपाईंको ग्राफिक्स ट्याब्लेटमा महत्वपूर्ण छुट.
XP- पेन स्टार 03
कम लागतको ग्राफिक्स ट्याब्लेट, तर यसको गुणस्तर एक छ। हामी एउटा ग्राफिक्स ट्याब्लेटको बारेमा कुरा गर्दैछौं २,०2.048 levels को स्तर संवेदनशीलताको साथ पेन्सिलको साथ। स्क्रिन क्षेत्र १० x inches इन्च हो र सबैभन्दा सामान्य कार्यहरूको लागि custom अनुकूलनयोग्य एक्सप्रेस कुञ्जीहरू प्रस्ताव गर्दछ।
यससँग t स्पर्शिक एक्सप्रेस कुञ्जीहरू पनि छन् जुन धेरै सामान्य प्रकार्यहरू पहुँच गर्न सक्छ यसको सक्रिय क्षेत्र १० × inches इन्च छ। हामी ती मध्ये एक सही ग्राफिक ट्याब्लेटको सामना गर्दैछौ जो डिजिटल कलाको साथ शुरू गर्छन् वा पेन्सिल डिजाइन गर्न आवश्यक पर्दछ। राम्रो गुणस्तर र तपाईलाई ब्रान्ड थाहा छैन भने पनि, हामीले भने जस्तै यो एक सुरूवात ग्राफिक्स ट्याब्लेट हो र अर्कोमा सर्ने बारे सोच्नुहोस्।
तिमी सक्छौ यसलाई लगभग e२ यूरोमा किन्नुहोस्। सिफारिश गरिएको मध्ये एक यदि तपाईंसँग उच्च बजेट छैन भने।
यस ग्राफिक्स ट्याब्लेट बाट Huion १ inches ..19,5 इन्च छ र यसको कलममा हामी,, १ 8.192 levels स्तरहरूको एक प्रेशर संवेदनशीलता पाउँछौं। यो पर्दामा सम्मिलित भएर विशेषता गरिएको छ त्यसैले यो Wacom को हाई प्रोफाइल जस्तो देखिन्छ, तर तार्किक रूपमा फरक मूल्यमा।
त्यो स्क्रिनले पूर्ण HD रिजोलुसन र राम्रो रंग प्रतिनिधित्व प्रयोग गर्दछ। यो संग रिचार्जेबल PE330 अप्टिकल पेन जुन कुनै पनि समयमा हामीले अनुकूलन गर्न सक्ने छिटो कार्यहरूको लागि यसको दुई बटनहरू द्वारा चित्रण गरिएको छ। जिज्ञासु कुराको रूपमा, ड्रइ a्ग ग्लोभ थपिएको छ (हातमा पसिनाका दागहरू छोड्नबाट जोगिन) र थप सुझावहरू ताकि तपाईं आफ्नो कलममा कहिले पनि नछुटाउनुहोस्।
खाताहरू लिनको लागि एउटा ट्याब्लेट यदि हामीसँग ठूलो बजेट छ भने। यसको मूल्य 452 यूरो हो, त्यसैले सिफारिस गरिएको मध्ये एक यदि हामी हार्डवेयर खोज्दै छौं न कि उच्च मूल्यको बदलामा।
Wacom बांस CTL471
ती मध्ये अर्को शुरुआतीहरूको लागि उपयुक्त ग्राफिक ट्याब्लेटहरू वा जसले आफ्नो क्यारियर डिजाईन गर्न समर्पित गर्न चाहान्छन्, किनकि हामी एक आर्थिक राम्रोको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन प्रसिद्ध Wacom ब्रान्डबाट आउँदछ। योसँग १,०२1.024 प्रेशर पोइन्टहरू छन् र Wacom Intuos Pro को सानी बहिनीको रूपमा लिइन्छ। तपाईं यसलाई USB केबलको साथ कम्प्युटरमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ र यसले यो कलमको लागि विभिन्न मोटाईको तीन सुझावहरू ल्याउँछ।
को आकार क्षेत्र २१ x १.21..14,8 सेन्टीमिटर छ 5,8 ″ को सतह संग। यसको मूल्य १२१..121,38 युरो पुग्छ। हामीले भन्नु पर्छ कि यसको नयाँ मोडल छ जुन यसलाई बदल्नको लागि आउँदछ, Wacom Intuos Art जुन हामीले केहि अनुच्छेदहरू पहिले यहाँ छलफल गर्‍यौं।
रोक्न नबिर्सनुहोस् यस वर्ष २०१ of को नयाँ Wacom क्याटलगका लागि.
Huion 1060 प्लस
यो ग्राफिक्स ट्याब्लेट यो यस ब्रान्डको सब भन्दा बेच्ने बिक्रीलाई बदल्न आउँछ, Huion 1060 Pro। surface, १ 8.192 levels२ को दबावको साथ कलमको विशेषता रहेको ठूलो सतह ड्रइ tablet ट्याब्लेट। यसको १२ सर्टकट कुञ्जीहरूको साथ, तपाईं ग्राफिक्स ट्याब्लेट मार्फत उत्पादकता बढाउन सक्नुहुन्छ।
कलम रिचार्जेबल हो, समावेश गर्दछ दुई कुञ्जीहरू र दिन सक्षम छ ड्राइंग गर्दा तपाईलाई चाहिने सबै। यसको कार्य क्षेत्र १० x .10.२6,25 इन्च उत्कृष्ट प्रतिक्रिया गतिको साथ छ।
यसको मूल्य? .१.81,99। युरो। Y त्यसैले हामी तपाईंलाई ग्राफिक ट्याब्लेटको यो महान सूचीको साथ छोड्छौं जुन तपाईं अर्को ब्ल्याक फ्राइडेमा खरीदको लागि तयारी गर्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » उत्तम ग्राफिक्स ट्याबलेटहरू